ထူးဆန်းသော သုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထူးဆန်းသော သုံး
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 12, 2012 in Creative Writing | 31 comments
ထူးဆန်းသော တစ်နှင့် နှစ်ပို့စ်များတွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့ပြီး ဖြစ်လေသည်။
ယခု ရေးသားမည့် ပို့စ်အဆက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါကြောင်း …
ဖတ်ရတဲ့ ၃ ပိုင်းလုံး ထူးဆန်းလွန်းလို့ ဘယ်လို ကွန်မန့်ပေး၇မယ်တောင်မသိဘူး….ထူးဆန်းနေတယ်ဗျ…။
ခုလို ဦးဦးဖျားဖျား မန့်ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ (ကော်ပီဖြစ်၏)
ကျနော့်ရဲ့ အထက်ပါ ဝတ္ထုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန် သုံးသပ်ချက်ပေးပါဦးလို့လည်း
ဘယ်နေရာကတော့ဖြင့် ဘယ်လို .. စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ ..
အဲဒီလို ဝေဖန်အကြံပေးလို့ရှိရင်ဖြင့် ကျနော့်အနေနဲ့ နောက်ထပ်ရေးတဲ့အခါ ဆင်ခြင်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လေးစားစွာနဲ့ပဲ စာဖတ်သူရဲ့ အမြင်တွေကို တောင်းခံပါတယ် ခင်ဗျာ …။
မင်းသားလေးရဲ့ သိုက်ကို တူးကြစွကြမယ် လို့ ထင်မိပါတယ်
ခုလို ကျနော့်ရဲ့ပို့စ်ကို လာရောက်
ဖတ်ရှုအားပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါလို့ပဲ ပြောပါရစေဗျာ …
တောက်တဲ့ရဲ့ တစ်တစ်တစ် ကြိမ်မြောက် ထူးဆန်းသော ပို့စ်ကြီးကို ဇာတ်သိမ်းရောက်အောင်
ပထမဆုံးအပိုင်းမှာ ပါတဲ့ လွန်စွာလှပသော မိန်းကလေးဆိုတာ ပျောက်နေတယ်နော်..
ဖတ်တဲ့သူကို စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးနိုင်တဲ့
အံစာတုန်းရေ..ဆရာမင်းသင်္ခ လား မှတ်ရတယ်
တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပါ ဆက်လက်စောင့်မျော်
တစ်တစ်တစ် ကြိမ်မြောက် ထူးဆန်းသော ပိုစ့်ကြီးပါလား။
အင်းကွက်လေးရှိတဲ့ ဦးအောင်မောင်းက သိုက်တူးဆရာ
ဖိုးသူတော်က သိုက်တူးဆရာကို တန်ပြန်မယ့် အထက်ဂိုဏ်း ဘိုးတော် ဖြစ်ရမယ်။
ဟပ်ချလောင်း…….. မှန်မမှန် နောက်ပိုစ့်မှာ ပေါ်စေသတည်းးးးးးးးးးးး
မစ္စတာ တောက်တဲ့ရေ ထူးဆန်းသော ကိုစောင့်ဖတ်နေပါတယ်။ ထူးဆန်းသောက ထူးဆန်းစွာနဲ့ ဆွဲဆောင်နေတဲ့ အတွက် နောက်တစ်ပိုင်းကို မြန်မြန်တင်ပါတော့။
စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်လာခဲ့တာ ဖိုးသူတော်က အအိပ်ကြီးပြီး
ဘယ်လိုပေါ်လာရတာလဲနော် အတွေးတွေလဲ ပေးသွားသေးတယ်
အောင်မလေး၊ ဖတ်ရတာကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရှည်လွန်းတော့ အချိန်ယူဖတ်ရတယ်
ထူးဆန်း သောပို့ စ်မို့ လေးစားပါ၏ကိုစနေသားရေ
ထူးဆန်းသောသုံး ဆိုလို့ ၃ဂဏန်းအကြောင်းထူးဆန်းတာတွေပြောတော့မယ်မှတ်တာ။ မေ့တွားလို့နော် အာဟိ
ခုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်၏ ထူးဆန်းသော ပို့စ်အား
လာရောက်ကာ အားပေးဖတ်ရှုသွားတော်မူကြပါကုန်သော အရပ်ကတို့အား
ကျွန်ုပ်မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း …
နောက်လာမည့်အပိုင်းတွင် အပြီးသတ် တင်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ….
“ဘုန်းကြီးများ သင်္ကန်းရမ်းသကဲ့သို့ ဝတ်ရုံထားသည့်” ကိုတောက်တဲ့ရေ ရမ်းဖြစ်နေတယ် ရုံတာမို့လား
လျှောက်ပြောကြည့်တာပါ။ ဇာတ်ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းရေးဖွဲ့ထားတာကောင်းပါ၏။ ထပ်ထူးဆန်းရင်တော့မနည်းကိုဆက်စပ်ယူရတော့မယ် အဟီး ဥာဏ်မကောင်းလို့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မရွှေကြည်ရေ ..
ခုလို ထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါနော့ ..
ကျနော်က သင်္ကန်းကို ရမ်း တယ်လို့ ပြောတာက ဒီလိုပါ ..
ငယ်ငယ်က ကိုရင်ဝတ်တုန်းကပေါ့ဗျာ ..
ဘုန်းကြီးတွေက သင်္ကန်း သေချာမရုံထားရင် ခုလို ပြောတယ်ဗျ ..
“ဟေ့ ကိုရင် သင်္ကန်းကို သေချာရမ်းလေ”
ဒါကို ယူပြီး သင်္ကန်းရမ်းတယ်လို့ သုံးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ ..
အဲ ရွှေကြည်မသိလို့နော် ကိုတောက်တဲ့။
နောက်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရူ့ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇာတ်သိမ်းတွင် အဖျားမရူးရန် လိုအပ်ကြောင်း ထပ်လောင်းတင်ပြပါတယ်ချင့် ……. ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ဘယ်လိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ရေးခဲ့ကြောင်း တင်ပြပေးစေချင်ပါတယ် …..
ခုလို ဇာတ်သိမ်းမှာ အဖျားရှူးမသွားဖို့ သတိပေးတာကို
ဒီဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ကူးနဲ့ ရေးခဲ့တယ် ဆိုတာကတော့ဖြင့်
လာမည့် အပိုင်းမှာ တစ်ပါတည်း ရေးသားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း …
ဟုတ်ကဲ့ပါ …. နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးမှာ ထည့်ရေးပေးစေချင်လို့ အခုကတည်းက တောင်းဆို ခဲ့တာပါ …….. ဇာတ်လမ်းလေးကအရမ်းကောင်းတော့ ဇာတ်သိမ်းလေးကိုလဲ ရင်ထဲစွဲကျန်ချင် လို့ပါ …….
ဒါမှမဟုတ် ဆရာတင့်ဆန်း ကပ္ပိယကြီးဦးဖြူသီးအတိုင်းဘဲကောင်း၏။
သားသား ဘူလဲချိုဒါ သိဒယ် မဟုတ်လားဂျ ..
အခြားလူ ထင်နေမှာစိုးလို့ ကြောဒါ ..
သားသားဂ အံစာတုံး ဖြစ်ကြောင်းပါ ..
(အပေါ်မှာလည်း ပါပြီးသားပဲ ..
မင်းက တော်တော် လျှာရှည်တယ် … ခွီးးးးးး)
ဘိုအံတို့ က ဒါမျိုး ပိုင်သဗျာ..
ဘိုအံကြီးအရေးအသားကို ခိုက်သဖြင့် မိတ်လိုက်ခွင့်..အဲလေ..မိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါနော်..
ကျော်က ဘိုအံကြီးရဲ့ ပရစ်သတ်ပါ..ကျော့်နာမည် ဗိုက်ကလေးပါ..ဘိုအံကြီးကို ဘီအီးတိုက်ခွင့်ပုပါ..
များများရှိရင် ရှယ်ပဲဟ ..
ဘီအီးဒေါ့ အဝသောက်ရမယ် .. ငွဲ .. ငွဲ ..
စောင့်ဖတ်နေတယ် ကိုအံဇာတုံး ။ ဒါလေးရေးတာ သဘောကျမိတယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့။
“ဒီမှာ အိပ်လို့ ကောင်းနေတုန်းရှိသေးတယ်၊ လူတွေ နိုးနေတာများ အလန့်တကြားဖြစ်အောင် ပြောရတယ်လို့၊ ဒီမှာ မှတ်ထား၊ ကျုပ်က လူ မဟုတ်ဘူး၊ ဖိုးသူတော်ဗျ၊ ဖိုးသူတော်”
ဟုတ်သားဟ လူတွေနိုးတာဖိုးသူတော်နဲ့ ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့၊ နော်……..